ONEPLUS6ကင်မရာမှာ AI လုပ်ဆောင်ချက်ပါဝင်လာမှာလား ? | Myanmar Mobile App
Home Trending Smartphone ONEPLUS6ကင်မရာမှာ AI လုပ်ဆောင်ချက်ပါဝင်လာမှာလား ?
OnePlus ရဲ့စမတ်ဖုန်းသစ်မိတ်ဆက်မယ့် ရက်နီးလာလေလေ သူနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အချက်အလက်တွေက ထပ်ထွက်လာလေပါဘဲ။ အခုလည်းအသစ်ထွက်မယ့် OnePlus6ကင်မရာမှာ AI လုပ်ဆောင်ချက်ပါလာနိုင်မယ့် နမူနာလေးတစ်ခုကို ထပ်တွေ့ရပြန်ပါပြီ။ တရုတ်စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ Weibo အကောင့်မှာ အသစ်ထွက်လာမယ့် စမတ်ဖုန်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ကြော်ငြာပိုစတာလေးတစ်ခုကို တင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုစတာမှာ ပြထားတာကတော့ OnePlus6မိတ်ဆက်မယ့်ရက်နဲ့အချိန်စာသားတွေနဲ့အတူ AI လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်ကို မြင်တွေ့ရဖို့ ၃ရက်သာလိုပါတော့တယ် စာသားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကင်မရာပိုင်းအဆင့်မြင့်တင့်မှုအရ AI လုပ်ဆောင်ချက် ပါဝင်ဖို့လုံးဝသေချာသွားပါပြီ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အခုနောက်ပိုင်းအသစ်ထွက်လာတဲ့ စမတ်ဖုန်းအများစုဟာ သူတို့ဖုန်းတွေရဲ့ ကင်မရာလုပ်ဆောင်ချက်ပိုင်း AI စွမ်းဆောင်ရည်ကို မဖြစ်မနေထည့်သွင်းနေကြတာတာကိုတွေ့ရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းဟာ အရောင်၂မျိုးနဲ့ထွက်လာမှာဖြစ်ပြီး Midnight Black နဲ့ Mirror Black တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဖြူရောင်ထွက်လာဖို့ကတော့ မသေချာသေးပါဘူး။ ဒေါ်လာ620 လောက်နဲ့စတင်ရောင်းချနိုင်ပြီး 8GB+256GB ဗားရှင်းကတော့ $700 ကျသင့်နိုင်ပါတယ်။
သူ့မှာပါဝင်မှုတွေအနေနဲ့ 6.23 လက်မ optic AMOLED display နဲ့ခပ်ရှည်ရှည် (19:9 aspect ratio ) မှာ 2280 x 1080p resolution နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Qualcomm Snapdragon 845 chipset နဲ့အတူ 6GB/8GB RAM ဗားရှင်း၂မျိုးထွက်လာမှာဖြစ်ပြီး၊ အချက်အလက်သိုလှောင်မှုပိုင်းမှာလည်း 64GB/128GB/256GB ဆိုပြီးရှိပါလိမ့်မယ်။ ဈေးအကြီးဆုံးကတော့ 8GB+256GB ဗားရှင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ 16MP+20MP နောက်ကျောဘက်ကင်မရာမှာ OIS နဲ့ AI စွမ်းအားထောက်ပံ့မှုပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ပြီး၊အရှေ့ဘက်ကင်မရာကတော့ 16MP ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ယခုလ၁၇ရက်နေ့ တရုတ်စံတော်ချိန် ၁၀နာရီမှာ မိတ်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီး ၂၂ရက်နေ့မှာ စတင်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းစတိုးဖြစ်တဲ့ Amazon Prime ကနေတော့ မေ၂၁ရက်နေ့မှာ စတင်ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယမှာတော့ ပရီအော်ဒါကို ဒီရက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ 13ရက်နေ့ 16ရက်နေ့အထိလက်ခံနေပါတယ်။
OnePlus ရဲ့စမတျဖုနျးသဈမိတျဆကျမယျ့ ရကျနီးလာလလေေ သူနဲ့ပတျသတျတဲ့ အခကျြအလကျတှကေ ထပျထှကျလာလပေါဘဲ။ အခုလညျးအသဈထှကျမယျ့ OnePlus6ကငျမရာမှာ AI လုပျဆောငျခကျြပါလာနိုငျမယျ့ နမူနာလေးတဈခုကို ထပျတှရေ့ပွနျပါပွီ။ တရုတျစမတျဖုနျးကုမ်ပဏီအနနေဲ့ သူတို့ရဲ့ Weibo အကောငျ့မှာ အသဈထှကျလာမယျ့ စမတျဖုနျးနဲ့ပတျသတျတဲ့ ကွျောငွာပိုစတာလေးတဈခုကို တငျလိုကျတာဖွဈပါတယျ။ ပိုစတာမှာ ပွထားတာကတော့ OnePlus6မိတျဆကျမယျ့ရကျနဲ့အခြိနျစာသားတှနေဲ့အတူ AI လုပျဆောငျခကျြအသဈကို မွငျတှရေ့ဖို့ ၃ရကျသာလိုပါတော့တယျ စာသားလေးပဲဖွဈပါတယျ။
ကငျမရာပိုငျးအဆငျ့မွငျ့တငျ့မှုအရ AI လုပျဆောငျခကျြ ပါဝငျဖို့လုံးဝသခြောသှားပါပွီ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ အခုနောကျပိုငျးအသဈထှကျလာတဲ့ စမတျဖုနျးအမြားစုဟာ သူတို့ဖုနျးတှရေဲ့ ကငျမရာလုပျဆောငျခကျြပိုငျး AI စှမျးဆောငျရညျကို မဖွဈမနထေညျ့သှငျးနကွေတာတာကိုတှရေ့လို့ပဲဖွဈပါတယျ။ ဖုနျးဟာ အရောငျ၂မြိုးနဲ့ထှကျလာမှာဖွဈပွီး Midnight Black နဲ့ Mirror Black တို့ပဲဖွဈပါတယျ။ အဖွူရောငျထှကျလာဖို့ကတော့ မသခြောသေးပါဘူး။ ဒျေါလာ620 လောကျနဲ့စတငျရောငျးခနြိုငျပွီး 8GB+256GB ဗားရှငျးကတော့ $700 ကသြငျ့နိုငျပါတယျ။
သူ့မှာပါဝငျမှုတှအေနနေဲ့ 6.23 လကျမ optic AMOLED display နဲ့ခပျရှညျရှညျ (19:9 aspect ratio ) မှာ 2280 x 1080p resolution နဲ့ဖွဈပါတယျ။ Qualcomm Snapdragon 845 chipset နဲ့အတူ 6GB/8GB RAM ဗားရှငျး၂မြိုးထှကျလာမှာဖွဈပွီး၊ အခကျြအလကျသိုလှောငျမှုပိုငျးမှာလညျး 64GB/128GB/256GB ဆိုပွီးရှိပါလိမျ့မယျ။ ဈေးအကွီးဆုံးကတော့ 8GB+256GB ဗားရှငျး ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ 16MP+20MP နောကျကြောဘကျကငျမရာမှာ OIS နဲ့ AI စှမျးအားထောကျပံ့မှုပါဝငျလာမှာ ဖွဈပွီး၊အရှဘေ့ကျကငျမရာကတော့ 16MP ရှိမှာဖွဈပါတယျ။
ယခုလ၁၇ရကျနေ့ တရုတျစံတျောခြိနျ ၁၀နာရီမှာ မိတျဆကျသှားမှာဖွဈပွီး ၂၂ရကျနမှေ့ာ စတငျရောငျးခသြှားမှာဖွဈပါတယျ။ အှနျလိုငျးစတိုးဖွဈတဲ့ Amazon Prime ကနတေော့ မေ၂၁ရကျနမှေ့ာ စတငျရောငျးခမြှာဖွဈပါတယျ။ အိန်ဒိယမှာတော့ ပရီအျောဒါကို ဒီရကျပိုငျးဖွဈတဲ့ 13ရကျနေ့ 16ရကျနအေ့ထိလကျခံနပေါတယျ။
Previous articleYouTube အတွက် “takeabreak” reminder feature လေးထွက်ရှိလာပါပြီ
Next articleOffline Gmail Mode သုံးစွဲသူများထံ ရောက်ရှိလာ